Amazon na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume iji ngwugwu ndị mmekọ ha. Ọ bụ ara kpamkpam oge ọ bụla m gara ebe ahụ maka njikọ, enweghị m ike ịnweta ya. Lee otu ihe atụ. Azụtara m ìgwè ehi na nso nso a: Otu esi agbanwe Omume Mass site na ijikọta Ezi ọdịdị anyị (site na Akara Earl) Mgbe ị gụsịrị banyere ya na blọọgụ Hugh MacLeod - gapingvoid.
Enwetara m nsonaazụ 10. N'ime akwụkwọ iri, akwụkwọ Mak bụ naanị onye akpọrọ "Ahịhịa" mana ọ bụ nọmba 10 na ndepụta ahụ. Nọmba 3 bụ uche nzuzo nke Elephant. Daalụ Amazon!
Ihe onyonyo a egosighi. M chọpụtara na Amazon na-adịghị gụnyere onye ikwu ụzọ ka ihe oyiyi site na ha na ngalaba. Ha zaghachiri m azụ ma gwa m na ọ bụ n'ihi na m ga-eziga ihe oyiyi ahụ na sava m. Ị na-egwusa m egwu? Ndi Amazon abughi ulo nke S3?
Mmelite: Ọ bụrụ na ị ka na-alụ ọgụ maka ijikọ njikọ gị, aga m akwado iji ya Onye Mmekọrịta Amazon Associated!
Ekwula na ọ bụ HTML belụsọ na ọ bụ HTML. The HTML ị na-enye adịghị nwere nri URI ka ihe oyiyi!
Nke a ga - ewe oge 20 m iji chọta koodu darn ma were ya gbadaa n'okpuru nkeji. N'ikwu eziokwu niile, echeghị m na atụmatụ nke ọrụ mgbakwunye a agbanweela kemgbe ọ malitere. Onye na-arụ ọrụ njikọ ahụ ka na-etinye nkwado azụ (Amazon - lee anya Ajax na nhọpụta akwụkwọ gị). Ọ dị egwu n'ụbọchị 1 ma ọ dị egwu ugbu a. Ya mere,… ọ bụghị naanị na ọrụ dị ala, interface ahụ na-eme nzuzu.